Grafayithi Iphepha Grafayithi Plate Abavelisi kunye nabaXhasi | I-China Graphite Sheet Graphite Plate Ifektri
Grafayithi anode ipleyiti ye-electrolysis
Kwiseli ye-electrolytic, i-electrode ephuma kuyo ngoku i-electrolyte ibizwa ngokuba yi-graphite anode plate. Kwimveliso ye-electrolytic, i-anode yenziwe ngokubanzi ibe yimbumba yeplate, ngoko ibizwa ngokuba yi-graphite anode plate. Isetyenziswa ngokubanzi kwi-electroplating, unyango lwamanzi amdaka, izixhobo zokulwa umhlwa okanye njengezinto ezizodwa. Grafayithi anode ipleyiti uneempawu ukumelana lobushushu eliphezulu, conductivity elungileyo kunye conductivity thermal, machining lula, uzinzo elungileyo yemichiza, acid kunye nokumelana kwealkali kunye nomxholo ash low. Ingasetyenziselwa isisombululo se-electrolyzing aqueous, esenza i-chlorine, i-caustic soda, kunye nokwenza i-alkali kwisisombululo setyuwa se-electrolyzing. Umzekelo, grafayithi anode ipleyiti inokusetyenziswa njenge-anode eqhubayo yokwenza i-caustic soda kwisisombululo setyuwa se-electrolyzing.